merolagani - फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सले प्रकाशित गर्यो पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण, वित्तीय अवस्था कस्तो?
फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सले प्रकाशित गर्यो पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण, वित्तीय अवस्था कस्तो?
Oct 21, 2021 05:01 AM Merolagani
फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (FMDBL) चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। विवरण अनुसार लघुवित्तको खुद नाफामा झिनो गिरावट देखिएको छ।
खुद ब्याज आम्दानी घटेसँगै सम्भावित जोखिम बापतको व्यवस्थामा बढी रकम छुट्याउँदा लघुवित्तको खुद नाफा घट्न पुगेको हो। समीक्षा अवधिमा लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी ९.१७ प्रतिशत घटेको छ भने अन्य सञ्चालन आम्दानी २८०.४५ प्रतिशत बढेको छ। सो अवधिसम्ममा लघुवित्तले सम्भावित जोखिमबापत १ करोड ५२ लाख ६३ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ। जसले गर्दा कुल सञ्चालन आम्दानी २७.४१ प्रतिशत बढेपनि सञ्चालन मुनाफा ०.२३ प्रतिशत घटेको छ।
खुद नाफासँगै लघुवित्तको प्रतिशेयर आम्दानी पनि घटेको छ। समीक्षा अवधिमा लघुवित्तको यस्तो आम्दानी १ रुपैयाँ २६ पैसा घटेर १२ रुपैयाँ ३० पैसामा सीमित भएको छ। असोज मसान्तसम्ममा लघुवित्तको मूल्य आम्दानी अनुपात ७३.६ गुणा रहेको छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ १२१ रुपैयाँ ११ पैसा रहेको छ।
महिला लघुवित्तको नाफा बढ्यो, आईपीओ निष्काशनपछि ईपीएस घट्यो
Nov 18, 2021 09:18 AM
निष्क्रिय कर्जा उल्लेख्य घटेपछि निर्धन उत्थानको नाफा धनात्मक
Nov 16, 2021 04:31 AM
सामुदायिक लघुवित्तको नाफामा छलाङ, अन्य सूचक कस्ताे?
Nov 15, 2021 02:38 PM
विजय लघुवित्तको नाफा ४३ प्रतिशतले बढ्यो
Nov 15, 2021 02:10 PM
नेश्नल माइक्रोफाइनान्सको आकर्षक प्रगति, प्रतिशेयर आम्दानी १०० रुपैयाँ माथि पुग्यो
Nov 15, 2021 12:38 PM
आरम्भ चौतारी लघुवित्तको नाफा १५ प्रतिशत बढ्यो